CBD तेल र पूर्ण स्पेक्ट्रम CBD तेल बीच के फरक छ? - सीबीडी अनलाइन स्टोर
CBD तेल र पूर्ण स्पेक्ट्रम CBD तेल बीच के फरक छ?
पूर्ण स्पेक्ट्रम सीबीडी तेल उत्पादनहरु स्वास्थ्य लाभ को लागी लोकप्रियता मा छिटो बढ्दै छ कि निद्रा मुद्दाहरु, दुखाई, सूजन र चिन्ता बाट राहत समावेश छ। तपाइँ यी प्रयोगहरु मध्ये केहि संग परिचित हुन सक्नुहुन्छ, जे होस् त्यहाँ सीबीडी उत्पादनहरु को दुई फरक प्रकार छन् CBD बजार। सीबीडी पृथक बनाम को बारे मा जान्न को लागी सबै कुरा जान्नुहोस्। पूर्ण स्पेक्ट्रम सीबीडी तेल, प्रत्येक को शक्ति सहित, सिफारिश को उपयोग गर्दछ र कसरी दुई को बीच निर्णय गर्ने।
पूर्ण स्पेक्ट्रम CBD के हो?
हेम्प वा भांगको बिरुवा सयौं फाइटोकेमिकल्सको घर हो, जसमा टेरपेन्स र अन्य रासायनिक मेकअप जस्ता क्यानाबिनोइड्स सामेल छन्। पूर्ण स्पेक्ट्रम सीबीडी तेल उत्पादनहरु लाई मात्र सीबीडी कम्पाउन्ड, जस्तै फैटी एसिड, टीएचसी र टेर्पेन्स जस्ता अन्य बिरुवा अणुहरु को रूप मा समावेश गरीन्छ। पूर्ण स्पेक्ट्रम सीबीडी तेल लाई प्राय "पूरै बिरुवा" तेल भनिन्छ किनकि बिरुवा निकाल्ने को पूर्ण रासायनिक मेकअप शामिल छ।
CBD आइसोलेट के हो?
CBD isolate सामान्यतया "शुद्ध CBD" वा सम्बन्धित 99 देखि 100 प्रतिशत CBD मा लेबल गरीन्छ। जसरी तपाइँ नाम बाट ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ, यी उत्पादनहरु कुनै अतिरिक्त terpenes वा cannabinoids संग मात्र CBD कम्पाउन्ड अलग गर्न परिष्कृत गरिएको छ। यसको सीबीडी शक्ति सामान्यतया पूर्ण स्पेक्ट्रम भन्दा उच्च छ, मतलब एक सानो खुराक सामान्यतया सिफारिश गरीन्छ।
पूर्ण स्पेक्ट्रम CBD तेल बनाम CBD आइसोलेट को उपयोग
पूर्ण स्पेक्ट्रम सीबीडी तेल अक्सर एक सीबीडी पृथक ingesting गर्न को लागी राम्रो छ किनभने अनुसन्धान देखाउँछ कि terpenes र cannabinoids प्रकृति मा एक साथ हुन्छन् र जब संयुक्त उपयोगी तरीका मा अन्तरक्रिया गर्दछ। यो सिनर्जी को entourage प्रभाव भनिन्छ र सीबीडी एक व्यापक पहुँच जहाँ सम्म स्वास्थ्य लाभ को रूप मा दिने विश्वास गरिन्छ।
एक अनुसन्धान एतान रुसो, एमडी द्वारा पूरा अध्ययन, पूर्ण स्पेक्ट्रम सीबीडी मा terpenes को लाभ को जाँच, शर्तहरु को एक किसिम को लागी आशाजनक नतीजा देखाउँदै। उदाहरण को लागी, terpenes caryophyllene pinene र myrcene को संयोजन र tor लाई चिन्ता हटाउन मद्दत गर्दछ, जबकि terpenes limonene र cannabigerol (एक कम ज्ञात cannabinoid) को संयोजन MRSA को उपचार मा वाचा देखाउँछ। यहाँ सम्म कि terpenes limonene र CBD संग synergized एक शक्तिशाली विरोधी मुँहासे उपचार को लागी बनाउँछ। यो अनुसन्धानले त्यो देखाउँछ पूर्ण स्पेक्ट्रम CBD एक पूर्ण शरीर को अनुभव को अधिक छ।
को शक्ति मा अर्को इजरायली अनुसन्धान अध्ययन CBD अलग बनाम पूर्ण स्पेक्ट्रम CBD देखाए कि पूर्ण स्पेक्ट्रम CBD चिन्ता र सूजन को रूप मा यस्तो अवस्था को लागी क्लिनिकल सेटिंग्स मा अधिक लाभदायक थियो। शुद्ध CBD को परिणाम "घंटी को आकार को खुराक प्रतिक्रिया" मा भयो, जसको मतलब यो हो कि, जब CBD को मात्रा एक निश्चित बिन्दु भन्दा बढि भयो, यसको चिकित्सीय चिकित्सा प्रभाव धेरै कम भयो।
जे होस्, यसको मतलब यो होइन कि CBD अलग कहिल्यै लाभदायक छैन। केहि प्रयोगकर्ताहरु जो विशेष गरी THC ​​को लागी संवेदनशील छन् THC को कुनै पनि psychoactive साइड इफेक्ट बिना हेम्प प्लान्ट बाट लाभान्वित गर्न CBD अलग गर्न को लागी बारी। साथै ती जो THC को लागी सकारात्मक परीक्षण को बारे मा चिन्तित छन् CBD पृथक रुचाउँछन्। यसबाहेक, सीबीडी आइसोलेट्सले प्रयोगकर्ताहरुलाई रेकर्ड गर्न को लागी अनुमति दिन्छ कि उनीहरु प्रत्येक खुराक बाट कती सीबीडी प्राप्त गर्दैछन्।
के CBD अलग छ वा पूर्ण स्पेक्ट्रम CBD राम्रो?
तपाईं छनौट गर्नुहुन्छ कि पूर्ण स्पेक्ट्रम सीबीडी तेल वा सीबीडी अलग, तपाइँ प्राय सम्भवतः भांग बिरुवा को स्वास्थ्य लाभ अनुभव हुनेछ। अधिक उदीयमान अध्ययनहरु संग, शोधकर्ताहरु सीबीडी उत्पादनहरु को दुई प्रकार को बीच फरक को बारे मा हरेक दिन अधिक सिक्दै छन्। यसबाहेक, ती राज्यहरुमा बस्नेहरु को लागी जहाँ पूर्ण स्पेक्ट्रम CBD अनुपलब्ध रहन्छ, शुद्ध CBD अक्सर एक कानूनी र सकारात्मक समाधान प्रदान गर्दछ। आखिर, एक सानो सीबीडी पनी कुनै पनी सीबीडी भन्दा लाभदायक छ।
रातो सम्राट CBD पूर्ण स्पेक्ट्रम CBD तेल
रातो सम्राट CBD उच्चतम गुणस्तर छ पूर्ण स्पेक्ट्रम सीबीडी तेल अनलाइन बेचेको छ र हाम्रो तेस्रो पक्ष परीक्षण ग्यारेन्टी छ कि तपाइँ सीबीडी को सही मात्रा प्राप्त गर्नुहुनेछ।